မြို့ပြ ပျောက်ကျားစစ်ဆင်နည်း – ဂါမဏီ
Foreign workers employment act aye ... by Nyein Khant 349 views
Abidhamma Special Class 19 02 2015 ... by September_Nge 920 views
Astrologer at Student
Tayzar Koko at Private English Teacher
Tyn Oo , Deputy General Manager at Myanma Timber Enterprise at Myanma Timber Enterprise
San Lin Aung
1. မြို့ပြပြောက်ကျား စစ်ဆင်နည်း ဂါမဏိ ပြောက်ကျားရဲဘော် ­ သတ္တိ၊ ဦးနှောက်၊ ပါးနပ်လည်ဝယ်မှု၊ သံဓိဌာန် ခိုင်မာမှု ­ လက်ဖြောင့်ခြင်း၊ လက်နက်မျိုးစုံအကြောင်း အခြေခံအားဖြင့် သိနားလည်ခြင်း ­ ထိုးထွင်းကြံဆနိုင်စမ်း (အမှီအခိုကင်းစွာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်လုပ်နိုင်စွမ်း)၊ ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်စမ်း၊ ပြောင်းလွယ် ပြင်ွ လွယ် ဖြစ်မှု၊ ဘက်စုံနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဘယ်အနေအထားမဆို ချုပ်ကိုင်နိုင်စမ်ွး­ အပင်ပန်း အဆင်းရဲခံနိုင်ရည်၊ ငတ်ပြတ်ခံနိုင်ရည်၊ အမြဲသတိရှိမှု၊ စိတ်ရှည်မှု (ဂမူးရှုးထိုး မဆင်မခြင် မလုပ် ခြင်း)၊ စိတ်ဓာတ်မကျခြင်း၊ ခြေရာ လက်ရာ သဲလွန်စမချန်ခြင်း ­ လုံ့လ၀ီရိယနဲ့ ရိုးသားမှု ­ မျက်နှာအမူအရာ ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်တတ်ခြင်း၊ ခေါင်းအေးခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်ပုံတင်အတုများ ဖန် တီးသုံးစွဲတတ်ခြင်း ­ ရန်သူ့ဆီ ပေါ်နေသူ မဖြစ်စေရ ­ အခက်အခဲ ရင်မဆိုင်နိုင်၊ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ရင် အနားယူနှုတ်ထွက်ပါစေ။ အနေအထိုင် * သာမန်လူထက် ပိုမထူးခြားစေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ၀တ်စားနေထိုင် * ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာအား၊ ရန်သူ့အခြေအနေ လေ့လာအားကောင်းရမည် * ဖြစ်နိုင်သရွေ့ ပုံမှန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်လုပ်ပြီးနေ ရည်မှန်းချက် * သုတ်သင်ကွပ်မျက်ရေး * ဖောက်ခရေးနှင့် ဖျက်ဆီးရေွးဲ * ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းသိမ်းယူရေး (၄င်းအားဖြင့် ရဲဘော်တဦးချင်း စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်း၊ လိုအပ်သည့် လက် နက်ပစ္စည်းများဝယ် အတတ်ပညာပိုင်း ပြင်ဆင်မှု အဓိကကျ၊ ကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့် * လက်နက်ငယ် ကိုင်တွယ်ပစ်ခတ်နည်းနှင့် ဖောက်ခရေး၊ လက်ဖြောင့်ရေး (အဓိက)ွဲ * မိုင်းနှင့် ဗုံးလက်တွေ့လုပ်နည်း * အမှည့်ချွေ တိုက်ပနည်းပညာနှင့် အဖျက်လုပ်ငန်းနည်းပညွာဲ * လက်နက်မဲ့ ကိုယ်ခံပညာ * ခြေလျင်တောင်တက်၊ ရေကူး လှေလှော်၊ ရေငုပ် တောလိုက် * ကားမောင်းဆိုင်ကယ်မောင်း၊ စက်လှေ မော်တော်မောင်း၊ ယာဉ်စက်ပြင် * ရေဒီယို၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ၊ ဝေါ်ကီတော်ကီ ဆက်သွယ်ရေး GPS ကျွမ်းကျင်ရေး * မြေအနေအထားနှင့် အကွာအဝေး ခန့်မှန်းခြင်း၊ မြေပုံဖတ်မြေပုံဆပညွာဲ * ရှေးဦးသူနာပြုနည်း၊ သာမန် အသေးစား ခွဲစိတ်ကုသနည်း၊ ဆေးဝါးများအကြောင်း * စာရွက်စာတမ်းအတုလုပ်ငန်း www.nguyinpyin.net Page 1
2. အဆင့်မြင့် လေ့ကျင်ရေးစခန်းသို့ အခြေခံလက်တွေ့အလုပ် ဖြတ်သန်းပြီးသူသာ တက်ခွင့်ပေး၊ လက်နက်ငယ် * အပေါ့စား စက်သေနတ်ငယ်၊ အေကေဒင်ခေါက် (ဒင်ရှည် ပြောင်းရှည် မသင့်တော်)။ ကျည်ရေသောက်မြစ် စဉ်းစား * ၃၈ ခြောက်လုံးပြူး ပစ္စတိုနှင့် ဆိုင်လင်ဇာ * လက်ပစ်ဗုံး မီးခိုးဗုံး (ဆုတ်ခာရေးအတွက်)ွ* တလုံးပြောင်း (ညတိုက်ပဲအတွက်) ပြောင်းဖြတ်ထာွး* လက်ဖြောင့်ရေးအတွက် လေသေနတ် အပြင်းစား (နံပါတ်တူး သို့မဟုတ် လေထိုး လေသေနတ်) နဲ့ လေ့ကျင့်၊ စနိုက်ပါ အဆင့်ဖြစ် အောင်လေ့ကျင့် * လက်နက်ပြင်ပညာ တွင်ခုံ ပန်းဘဲ * မိုလိုတော့ဗ် ပုလင်းဗုံး။ ယမ်းနက်ဗုံး၊ အမိုးနီးယား ဓာတ်မြေသြဇာဗုံး ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ကိုင်တွယ်အသုံးချရေး (ကြာကြာ လှောင်မထား ဘဲ အမြန်အသုံးချ၊ အဆင့်မြင့် နိုင်ငံခြားဖြစ်ဗုံးများ ကာလတခု လှောင်ထားနိုင်) * လိုအပ်တာများ ၀ယ်ယူ သို့မဟုတ် သိမ်းယူ လုယူ ရန်ငါ စစ်ဒေါက်တိုင်များ 1. ထောက်ပို့ 2. ဆေးဝါး 3. ထောက်လှမ်းရေး 4. ဆက်သွယ်ရေး စုဖဲ့မွှုအဖွဲ့ငယ်တဖွဲ့ကို ၄­၅ယောက်ထား၊ အဖွဲ့ငယ် ၂ဖွဲ့ကို တပ်စိတ်တစိတ်၊ ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု မလုပ်ရန်။ အဖွဲ့ ငယ်အားလုံး အမှီခိုကင်း ကင်းလုပ်၊ မဟာဗျူဟာစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက် မရှိရင် ကိုယ့်ထိုး ထွင်းရှေ့ဆောင်မှုနဲ့ကိုယ် ကြိုက်သလို တိုက်။ လုပ်ငန်းတာဝန် ထောက်ပံရေး ။ ။ ယာဉ်၊ ငွေ၊ လက်နက်၊ ခဲယမ်း၊ ဗုံး­မိုင်း လိုအပ်သလို ၀ယ်­သိမ်း­လု နည်းဗျူဟာ * ထိုးစစ်လက္ခဏာ * အမြန်တိုက် ­ အမြန်ဆုတ် ရင်ဆိုင်တိုက်ပဲနှင့် အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပ ရှောင်။ အမြန်အဆုံးသတ်တိုက်ပ တိုက်။ွဲ * မဟာဗျူဟာအရ ခြွေစစ် အားသာချက် * အလစ်အငိုက်ရ * မြေအနေအထားပိုင် www.nguyinpyin.net Page 2
3. * လျင်မြန်လှုပ်ရှားနိုင်စမ်းွ* သတင်းထောက်လှမ်းရေးကောင်း * ပြတ်သားမြန်ဆန်စွာ ဆုံးဖြတ် * ရန်သူ ပို့­ဆက်­ထောက် လမ်းဖျက် ပစ်မှတ် * ဘဏ် * စက်မှုလုပ်ငန်း (ကပစအပါအ၀င်) * စစ်စခန်း စစ်အဆောက်အဦး * ထောင်၊ ရဲစခန်း * အစိုးရရုံးဌာန အစိုးရအသင်းအဖွဲ့* မီဒီယာ (သတင်းစာ၊ အသံလွှင့်ရုံ၊ ရုပ်သံလွှင့်ရုံ) * အစိုးရယာဉ်ယန္တရား * လောင်စာဆီ သိုလှောင်ရုံနှင့် ရေနံချက်စက်ရုံ * သဘောင်္ဆိပ်နှင့် သဘောင်္ * လေဆိပ်နှင့် လေယာဉ် * အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ခရီးစဉ် လမ်းကြောင်း * ပစ္စည်းဂိုဒေါင်နှင့် ကားစခန်းကားဂိုဒေါင် * ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အစိုးရနှင့် စစ်တပ်ထိပ်သီး အရာရှိကြီးများ၏ နေအိမ် လုပ်ငန်းတာဝန် · တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေး · စီးနင်းထိုးဖောက်ရေး · စီးနင်းသိမ်းပိုက်ရေး · ခြုံခိုတိုက်ပွဲ · လမ်းပေါ်တိုက်ပွဲ· သပိတ် · လက်နက်ခဲယမ်း သိမ်းလု၊ စစ်ပြေးအားပေး · ထောင်ဖွင့် · ကွပ်မျက်သုတ်သင် · အခွန်ကောက် (ပြန်ပေးဆွဲ) · ဖျက်ဆီးရေး · ဖောက်ခရေွးဲ · လက်နက်ကိုင်ဝါဒဖြန့်ချိရေး တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေး အဓိကအားဖြင့် ညဘက်လုပ်၊ ဘဏ်လုတာမျိုးတော့ နေ့မှာသာ ဖြစ်နိုင်၊ မလိုအပ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု မလုပ်ရန်၊ ပြည်သူလူထုပစ္စည်း သိမ်း ယူ လုယက်မှု မလုပ်ရန် လုပ်ငန်းပြီးရင် ၀ါဒဖြန့် ရှင်းလင်း လက်ကမ်းစာရွက် ထုတ်ပြန်ဖြန့်ဝေ၊ www.nguyinpyin.net Page 3
4. စီးနင်းရေး လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများ ရှာဖွေသိမ်းယူ၊ အဆောက်အဦး ၀င်လမ်း ထွက်လမ်း အားလုံးကြည့်ထား escape plan မရှိဘဲ မလုပ်ရ၊ လမ်းပေါ်တိုက်ပွဲသေနတ်ကိုင် တိုက်ပြွဲ ဖစ်စေ သေနတ်မဲ့ ခဲ­အုတ်သုံး တိုက်ပဲ ဖြစ်စေ၊ နှစ်ဖက်ညှပ်တိုက်ွရေရှည်မြှုပ်နှံ စစ်ပြေး သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ပြေးဖုိ့ အချိန်ရွေး၊ ဥပမာ၊ ကိုယ့်လူတွေရှိရာဘက် စစ်ဆင်ရေးထွက်ချိန်၊ ရန်သူများ လက် နက်တခြား လူတခြား သတိပေါ့နေချိန်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်လူန့ ချိတ်ဆက်ချိန်းချက်ပြီး လက်နက်သယ်နိုင်သမျှ သယ်မပြေး။ ယူမနိုင်ရင် ဖျက်ဆီးဖောက်ခခဲ့။ွဲ မြို့ပြပြောက်ကျား စစ်ဆင်နည်း (အပိုင်း ၂) လျှို့ဝှက်ကွန်ယက်/ကလပ်စည်းအဖွ့ဝင်မျာဲးလျှို့ဝှက်သော နည်းလမ်းများမှာ လူအများ၏ ပုံမှန် စဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံနည်းများနှင့် အတွေ့အကြုံများပေါ်တွင် အခြေပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ဆောင်ရန် ­အဓိကအားဖြင့် စည်းကမ်းရှိမှု၊ သတိဖြင့်စောင့်ကြည့်နိုင်မှုနှင့် မိမိဘာသာထိန်းချုပ်မှုတို့လိုအပ်။ ­လျှို့ဝှက်ဥပဒေများအတိုင်းလေးလေးနက်နက်လိုက်နာကျင့်သုံးရန်။ ­လျှို့ဝှက် အဖွဲ့အစည်းဝင်များသည် ခိုင်မာသော သန္နိဋ္ဌာန်ရှိသူ၊ စည်းစနစ်ကျနသူ၊ ရိုးသားသူ၊ တည်ကြည် ထိန်းချုပ်နိုင်သူ၊ လျှို့ဝှက် ချက်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူဖြစ်ရန်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အချင်းပြည့်ဝမှု၊ နိုင်ငံရေးအမြော်အမြင် ကြီးမားမှု၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု စသည်တို့ အဘက်ဘက်မှ ပြည့်စုံနေရမည့်အပြင် ရန်သူ၏ ထောက်လှမ်းရေး နည်းနာများ၊ တန်ပြန် ထောက်လှမ်းရေး နည်းနာများအားလည်း သိရှိရန်။ ­မြေအောက်လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွမ်းကျင်စာသင်ကြားတတ်မြောက်ပြီးရန်။ွ­လျှို့ဝှက်ကလပ်စည်းများအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လိုအပ်သလောက်သာ စနစ်တကျ ဖွ့စည်းရန်။ဲ­အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း လုပ်ငန်းအလိုက် သင့်တော်သူ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ရွေးချယ်ပြီး အရေအတွက် အနည်းဆုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန်။ ­လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် မြေပေါ်ရှိ အတိုက်အခံဆက်သွယ်မှုအား လုံးဝကန့်သတ်ထားရန် ­လုပ်ငန်းအလိုက် ကလပ်စည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ကလပ်စည်းခေါင်းဆောင်မှသာ ဗဟိုနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှု စနစ်ထား. ရှိရန်။ ­ကလပ်စည်းတခုတည်းတွင်လည်း ကလပ်စည်း ခေါင်းဆောင်မှသာ ကလပ်စည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်သွယ် ဆက်ဆံရန်နှင့် အဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု ဆက်ဆံမှုကို ကန့်သတ်ထားရန် (ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကလပ်စည်း ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် တာဝန် ခွပေးစဉ် ကတည်းက စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ရန်)။ဲ­ကလပ်စည်းအဖွ့ဝင်များကို လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သလောက်သာ အသိပေးထားရန်ဲ­ကလပ်စည်းတိုင်း ဖုံးကွယ်မှုအနေဖြင့် ယုံကြည်နိုင်လောက်သော ဟန်ပြလုပ်ငန်း၊ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးထားရန်၊ ထိုဟန်ပြလုပ်ငန်း ဇာတ် လမ်းကိုလည်း ကလပ်စည်းအဖွ့ဝင်များ သိရှိဇာတ်တိုက်ထားပြီးဖြစ်ရန်ဲwww.nguyinpyin.net Page 4
5. ရှောင်ရန် ­ လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နားမလည်သူတဦးအား လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်း မစေခိုင်းရန် ­ ကလပ်စည်းတခုနှင့်တခု ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်း လုံးဝမရှိစေရန် ­ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အရေအတွက် အကန့်အသတ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း (အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပတ် သက်၍ သိသင့်သိထိုက်သော ကိစ္စများကိုလည်း ကန့်သတ်ရန်) ­ ကလပ်စည်းများ၏ ဆက်သွယ်မှုစနစ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း (ဥပမာ­ ကလပ်စည်း ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ခြင်း) ­ မတူညီသော အစုအဖွဲ့စည်းများအချင်းချင်း သီးခြားစီ ခွဲမထားခြင်း ­ အကန့်စနစ်အား ပီပြင်စွာ လုပ်ဆောင်မထားခြင်း (ဥပမာ­ ဆက်သားအား စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွင် စေခိုင်းခြင်း) ­ စည်းကမ်းလျော့ရဲလာခြင်း (ဥပမာ­ စာရွက်စာတမ်းများအား စည်းကမ်းမဲ့စာထားခြင်း၊ လူများမသင်္ကာဖြစ် စေသော အပြုအမူမျာွးဆောင်ရွက်ခြင်း) ­ ကိုယ်ရေးနောက်ကြောင်းအား သေချာစွာ မစစ်ဆေးဘဲ ကလပ်စည်းအတွင်း ထည့်သုံးမိခြင်း ­ ဆက်သွယ်ရေး လျှို့ဝှက်ချက်များအား လိုက်နာကျင့်သုံးမှု မရှိခြင်း ­ ဖုံးကွယ်ရန် ဟန်ပြဇာတ်လမ်း အားနည်းခြင်း၊ မခိုင်လုံခြင်း ­ အစည်းအဝေး လှုပ်ရှားဆောင်ရက်မှုများအတွက် ပြင်ဆင်မှု အားနည်းခြင်ွး­ သိသင့်သော အချက်အလက်ကိုသာ သိထားရန်ဟူသော စည်းမျဉ်းဥပဒေအား ချိုးဖောက်ခြင်း ­ မိမိကလပ်စည်းအပေါ် ကျရောက်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်စဉ်းစား စီစဉ်မထားခြင်း ချုပ်ကိုင်မှု ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိလေလေ ချေမှုန်းခံရဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းလေလေ ပြဿနာနည်းလေလေ ဖြစ်ပါသည်။ မြေအောက်လုပ်ငန်းတွင် လုံခြုံရေးအဓိကဖြစ်ပြီး လူမှုရေးတရားမျှတမှုသည် အဓိကမဟုတ်ကြောင်း နားလည်ထားရပါမည်။ ကလပ်စည်းတခုအား ချုပ်ကိုင် သည်ဆိုရာမှာ ကလပ်စည်းအဖွ့ဝင်များအား မြေ အောက်လုပ်ငန်းများ စေခိုင်းခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်း၊ လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်း စည်းမျဉ်း ဥပဒေသဲအတိုင်း ဆောင်ရွက် ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ စည်းကမ်းသေ၀ပ်မှု၊ လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဥပဒေသများအတိုင်း နေထိုင် လုပ် ကိုင်ခြင်း ရှိ­မရှိ၊ ကလပ်စည်းနှင့် ကလပ်စည်းအဖွဲ့ဝင်များ တဦးချင်းစီ၏ တာဝန်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ရှိ­မရှိကိုသာ စောင့်ကြပ်စစ်ဆေး ချုပ်ကိုင်သွားရပါမည်။ ­ ကလပ်စည်းခေါင်းဆောင်သည် မြေအောက်လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းများ၌ အတွေ့အကြုံရှိပြီး လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရန် (သို့မှသာ ကလပ် စည်း အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းနည်းလမ်း အစီအစဉ်များကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်နိုင်မည်။ ­ လျှို့ဝှက်ကလပ်စည်းတခုသည် အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် ­ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်စမ်းရှိပြီး ချုပ်ကိုင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ရန်ွ­ အကယ်၍ ကလပ်စည်းအဖွဲ့ဝင်တဦးသည် စည်းကမ်းဖောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်း ဥပဒေသ များအား လိုက်နာခြင်း မရှိ ပါက ကလပ်စည်းအတွင်း၌ ချက်ချင်းထုတ်ပစ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ဘ တဖြေးဖြေး ကလပ်စည်းနှင့် ဝေးသွားအောင် ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံမျိုဲးဆောင်ရွက်ရန် လျှို့ဝှက်ဆက်သား မြေအောက်လုပ်ငန်းတွင် ဆက်သားသည် သက်သေအထောက်အထားနှင့် လက်ပူးလက်ကြပ်မိရန် ဖြစ်နိုင် ခြေအများဆုံးလူ ဖြစ်ပါသည်။ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လျှို့ဝှက်ကလပ်စည်းတခုအား ဖော်ထုတ်ရန် ဆက် သား၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းမှ ခြေရာခံလိုက်သည်မှာ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် … ­ လျှို့ဝှက်ဆက်သားအနေဖြင့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးကျွမ်းကျင်ရန် www.nguyinpyin.net Page 5
6. ­ လျှို့ဝှက်ဆက်သားသည် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အမြဲသားလာလှုပ်ရှားနေသူတဦး ဖြစ်ရမည့် အပြင် အာဏာပိုင်များ အွမြင်တွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့် ပုံမှန်သွားလာနေဟန် ဆောင်ရွက်ထားရန် ­ ဆက်သားတဦးအား ပုံမှန်လမ်းကြောင်းတွင်သာခိုင်းရန် (နယ်မြေကျော်စေခိုင်းပါက ၎င်းဆက်သားအတွက် အန္တရာယ် အများကြီးရှိမည် ဖြစ်သည်။ ­ ဆက်သား၏ တာဝန်မှာ စေခိုင်းသည့်အတိုင်း အတိအကျ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ် ချက်ဖြင့် လုံးဝ ဆောင်ရွက် ခွင့်မပြု ­ မြေပေါ်ရှိ အတိုက်အခံတဦးဦးထံဖြစ်စေ၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရသော ကလပ်စည်းအဖွ့ဝင် တဦးဦးထံဖြစ်စေ မိမိကလပ်စည်းအတွက်ဲအသုံးပြုနေသော ဆက်သားအား စေလွှတ်ခြင်း မပြုလုပ်မိစေရန် ­ ဆက်သားအား အလျင်စလို စေခိုင်းခြင်းမျိုး မပြုလုပ်သင့်၊ ဆက်သား၏ လုံခြုံရေးအတွက် ကလပ်စည်းခေါင်း ဆောင်တွင် တာဝန် အ ပြည့်ရှိ ပေသည်။ ­ လျှို့ဝှက်ဆက်သားများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လာခဲ့သည့် အချိန်ကာလ ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ မိမိလုပ်ငန်းအပေါ် ပေါ့ပေါ့ တန်တန် ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိလာတတ်သဖြင့် ထိုကဲ့သို့ မဆောင်ရွက်မိစေရေး အမြဲ သတိထားရန် ­ လုပ်ငန်းဆောင်ရက်ရန် ရှိသည့်အခါတိုင်း မိမိဆက်သွယ်ရမည့် လမ်းကြောင်းအား ကြိုတင်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ် ရန်ွ­ အကယ်၍ အန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့လာပါက မည်ကဲ့သို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမည် ဆိုသည့်အချက်အား လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်အခါတိုင်း ကြိုတင်စဉ်းစားထားတတ်သည့် အလေ့အထ အမြဲရှိနေရန် လျှို့ဝှက်စည်းရုံးရေးသမား မြေအောက်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် စည်းရုံးခြင်း မဟုတ်ဘဲ အင်အားရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် … ­ စည်းရုံးရေးသမားသည် သဘောတရားသာ အသုံးချရမည့်သူဖြစ်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး မည်သည့် အထောက်အထားမှ မပါရှိရန် ­ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အချင်း ပြည့်ဝမှု၊ နိုင်ငံရေးဗဟုသုတ ပြည့်ဝမှု၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု စသည့် အရည်အချင်းများ ပြည့်ဝနေရန် ­ ပြည်သူလူထုအား မိမိတို့၏လုပ်ငန်းအပေါ် ထောက်ခံလာအောင် စည်းရုံးနိုင်စမ်းရှိရန်၊ နယ်မြေလူထုမှလည်း လေးစားမှုရှိပြီးဖြစ်ရန်ွ­ ပြည်သူလူထုလေးစားသည့် ဆရာတော်ကြီးများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား စည်းရုံးရန် ­ မိမိစည်းရုံးရမည့် နယ်မြေအား အကျွမ်းဝင်ရန် ­ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ဖြတ်ထိုးဥာဏ်သုံးကာ ဆောင်ရွက်နိုင်စမ်းရှိရန်ွ­ မလိုအပ်သေးသ၍ မည်သူနှင့်မျှ အဆက်အသွယ်မပြုလုပ်ဘဲ တကိုယ်တည်း လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်ရန် ဖုံးကွယ်ရေး (နေ့စဉ်နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားရေး) ဆောင်ရန် ­ ပြည်သူလူထုနှင့် တသားတည်း ရှိနေသူဖြစ်ရန်၊ သာမန်ပြည်သူတဦးပုံစံဖြင့်သာ နေ့စဉ်နေထိုင်သွားရန် ­ ဘာအလုပ်မှ မရှိတာထက်စာရင် ဟန်ပြအလုပ်အကိုင်တခုခုန့ ဖုံးကွယ်မှုပုံစံ တမျိုးမျိုးရှိနေတာ ပိုကောင်းသည် (သာမန် လူထုပုံစဲံပေါက်ရမည်)။ ထူးဆန်းသော အမူအကျင့်များဖြင့် မိမိကိုယ်ကို လူအများ အာရုံစိုက်မ လာစေရန် ­ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့သည့်အခါ ထိတ်ပြာမနေဘဲ သွေးအေးအေးဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ­ ရန်သူသည် မိမိအား အချိန်မရွေး နောက်ယောက်ခံနိုင်ကြောင်း အမြဲ သတိရှိရန် (တခါတရံ လျှို့ဝှက်နောက် ယောင်ခံပြီး တခါတရံ ဗြောင်နောက်ယောင်ခံတတ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အတူတူဖြစ်ပြီး မိမိလုပ်ငန်းအား အနှောက်အယှက်ပြုရန်နှင့် လှုပ်ရှားမှုအား ကန့် သတ်ရန် ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်နောက်ယောက်ခံခြင်းသည် မိမိ ကလပ်စည်းတခုလုံးအား ခြေရာခံမိရန်ဖြစ်ပြီး ဗြောင်နောက်ယောင်ခံခြင်း သည် ကြောက်ရွံ့စေရန်နှင့် စိတ်ဓာတ်ခြောက်ခြားစေရန် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင် နောက်ယောင်ခံ အလိုက်ခံရပြီဆိုပါက နောက် ယောင်ခံအား သဘာဝကျကျ အမြန်ဆုံးဖြတ်ပစ်ရန်၊ မည်သူမှ မသိခင် အမြန်ဆုံးဖြတ်ပစ်နိုင်မှသာ မိမိကလပ်စည်းတ ခုလုံး အန္တရာယ် ကင်းနိုင်မည်။ ­ မိမိ၏ ဖုံးကွယ်ထားသော လုပ်ငန်းအား ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားရန် www.nguyinpyin.net Page 6
7. ရှောင်ရန် ­ အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ အလိုရှိနေသူ၊ နောက်ယောက်ခံ အလိုက်ခံရသူ မဖြစ်စေရန်။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ မိမိအကြောင်း ဘာမျှ မသိဘဲ ၎င်းတို့နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်သူဖြစ်ရန် ­ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်း၊ ကြီးကျယ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းများအား ရှောင်ကြဉ်ရန် ­ မိမိအဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း မလိုအပ်ဘဲ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ၀င်ထွက်သွားလာခြင်း မပြုလုပ်ရန် ­ မှတ်စုစာအုပ်၊ လိပ်စာစာအုပ်များ မဆောင်ထားရန်၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်ပေါ်တွင် အထောက်အထား မရှိ အောင် နေနိုင်ရန်၊ မိမိအား စွချက်တင်နိုင်သော မည်သည့်အရာမဆို ၀ှက်ထားရန်ဲ­ မည်သည့်အရာမဆို ပေါ့ပေါ့တန်တန် မတွက်ထားရန် ­ နှုတ်မမှားဘဲ မိမိလုပ်ငန်းအား မည်သူမျှမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားရန်၊ လျှို့ဝှက်ချက်အား အသက်နှင့်ထပ်တူ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်း မြေအောက် ဆက်သွယ်ရေး အမျိုးအစား အသုံးပြုနည်း များစွာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့မှာ သီးခြား တီထွင်ထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ လူအများ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေသော အရာများကိုသာ အခြားသူ အာရုံမစိုက်မိစေဘဲ အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေအောက်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့် လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ပုံ နည်း လမ်းများအား ကြေညက်စွာ တတ်မြောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ­ လျှို့ဝှက် တွေ့ဆုံပ တခုပြုလုပ်ရန် မြေအောက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအတိုင်း အသုံးပြုပြီး အချိန်၊ နေရာ၊ လူ ဦးရေ စသည်များ ကြွိုဲ တင် သတ်မှတ်ရန် ­ တဦးတယောက်နှင့် တွေ့ဆုံရန် ပြောသည့်အခါ အချိန်နှင့်နေရာပါ တပါတည်း ပြောဆိုရန်၊ ထို့အပြင် အရံနေရာပါ ပြောဆိုရန် ­ ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုအား မိမိ နေရာ မဟုတ်သည့်၊ မိမိ ယုံကြည် စိတ်ချရသူများ ရှိသည့်၊ မိမိ ကျွမ်းကျင်သော နေရာတွင် ပြုလုပ်ရန် ­ ဆက်သွယ်ရန် တွေ့ဆုံရန် နေရာသည် ရှာဖွေရန်လွယ်ကူပြီး အ၀င်အထွက်လည်း လွယ်ကူရန်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ လွတ်လပ်မှုရှိပြီး လုံခြုံ သည်ဟု စိတ်ခံစားရသော နေရာလည်းဖြစ်ရန် ­ ဆက်သွယ်ရာတွင် အချိန်တိကျမှုအား လူတိုင်းလိုက်နာရန်၊ သတ်မှတ်ချိန်ထက် (­­) မိနစ်ကျော် မလာလျှင် လူစုခဲရန်ွ­ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သည့်နေရာအား ပတ်ဝန်းကျင်မှ မရိပ်စားမီ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ­ အရေးကြီးသော ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်မည်ဆိုပါက လုံခြုံစိတ်ချရပြီး မှတ်စုလိုက်နိုင်သော၊ ပစ္စည်းလဲနိုင်သော နေရာဖြစ်ရန်၊ ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်နေစဉ် အမည်၊ လိပ်စာ၊ ရက်စများအား စာဖြင့်ရေးပြကာ မှတ်သားစေပြီး ချက်ချင်းဖျောက်ဖျက်ရန်ွဲ ­ ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင် ကြားခံအဆက်အသွယ် အနည်းဆုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ­ တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်မှာ မြေအောက်လုပ်ငန်းအတွက် နည်းလေကောင်းလေဖြစ်ပြီး မဖြစ်မနေသုံးရ မည်ဆိုပါက အများသုံး တယ်လီဖုန်းမှ ရိုးရှင်းသော စကားဝှက်များဖြင့် အသုံးပြုရန်။ ဂါမဏိ www.nguyinpyin.net Page 7
Foreign workers employment act aye nyein
Abidhamma Special Class 19 02 2015 to 22 02 2015 By U nyanawara (Pyinnyar Par...
သမိုင်း ၁၉၄၅ -ခု မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးသမိုင်း (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) -...
လူထုတိုက်ပွဲ မြေအောက်လက်စွဲ – မိုးသီးဇွန် – နစ်နေမန်း – ခင်မမမျိုး
လူထုစိန်ဝင်း အစိုးရကမိဘလား ပြည်သူက မိဘလား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာကြသော ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်များနှင့် ပတ်သက်သည့်လေ့လ...